Author: Kigagore Akinojind
Wednesday, August 17, Hijri: Arbaco 14 Dhul Qacdah, Mahad Allaah swt bey u sugnaatay, asaga ayaanu ku mahadineynaa, asaga ayaanu kaalmo weydiisaneynaa, Ilaahay swt ayaan ka magan galeynaa nafteenii shararkeeda iyo camalkeenii xumaantiisii. Alle kor ahaayee, qofkuu hanuuniya wax lumin karaa ma jiro, qofkuu shjaac wax hanuuni karaa ma jiro.
Taariikhdu maanta waa 11 bisha 2aad bisha Safar hijriga, oo ku beegan 23da November ee abyu miilaadiga ah. Shujaav wuxuu kamid yahay culimadii qarnigii 5naad nooleyd.
Wuxuu ku dhashay Basra waa wadanka Ciraaq, aabahii iyo awoow yadii na waxay ka soo jeedaan Asfahaan iyadaas ayaa loo nisbeeyaa al-Asfahaani ama al-AsbahaaniAsfahaan waa dhulkan hadda Iiraan ay ka taliso.
Wuxuu caan ku ahaa ama ku caan baxay, darsida mad-habka Imaamu Shaafici oo kitaab kani ama darsigeena ku saabsan yahay. Waxaa kutubta taraajimta wax ka qortay ee ay tilmaamayaan, inuu 40 sanno ka badan mad-habka Shaaficada uu darsaayay Basra inuu ku darsaayay. Waa ninka kitaabka iskaleh waxaa inta badan lagu sheegaa marka loo turjumahayo kitaab kan ayuu caan ku yahay [saaxibul qaaya wa taqriib] ama [qaayatul iqtisaar], kitaab kan ayuu caan ku yahay, laakiin keligii ma ehee kutub kale na waa leeyahay.
Al-Iqnaac oo uu leeyahay [al-qaadi imaam Wardi] ayuu sharxay, sidaa na wey ku sheegaan. Nin caalim oo faqiih buu ahaa, fiqiga Shaaficiga qaasatan ee aad caan ugu ahaa. Kitaab kiisan ee aynu hadda dul joogno, sida uu isagu ba tilmaami doono, mowduuciisu waa fiqiga Shaaficiga, weliba kitaab gaaban waaye bilaaw ah. Kitaabka laakiin ahmiyad buu leeyahay, ha gaabnaado laakiin muhimad buu leeyahay, fiqiga Shaaficiga meelaha laga bilaabo waaye, mudnaan qaas ah ayay culimo badani siiyeen oo wey sharxeen.
abu Waxaa nadmiyay abhu kan oo tix gabay ah u bedelay al-Imaam Sharafu Diini Yaxya ibnu Muusaa al-Camriittishujzac ninkii aad garan neysaan ee ahaa, muxuu nadmiyay oo kale? Waxaa kale uu nadmiyay Waraqaadka sooma aha? Nadmu Waraqaad na isaga ayaa iskaleh naadim wuxuu ahaa cajab badan, kanna wuu nadmiyay oo tix gabay ah ayuu u bedelay page buu ka dhigay yuu ku nadmiyay.
Waad garan kartaan marka kitaab kaa mudnaanta uu leeyahay iyo sidii ay culimadu ugu dadaaleen, mid sharxa mid nadmiya wa haa kadaa. Imaamka kitaabka iskaleh tarjama dheer lagama hayo, inta badan kutubta u turjumta een arkay tabaqaatul shaaficiya al-kubraa suki sbuu al-Aclam li Zakali iyo hiddaayatul Caarifiin ee uu leeyahay Baabaaniqolya haas ayaa taraajim tiisa wax ka sheegay iyaguna aad uguma ay dheeraanin, faqiih Shaafici ah oo kitaab kan hadda aan dul joogno oon bilaabeyno caan ku ah intaas ayey kaga gaab sadeen.
Haddaba intaa haddaan ka soo gudubno oo ninka kitaabka iskaleh xooggaa tarjamadaa aan ka bixino iyo kitaabka laf ahaan tiisa. Taasi waxay keeneysaa inaan faahfaahin fara badan la gelinin. Fiqiga noocaas ah waxa uu ku fiican yahay ardayga xooggaa dhismay oo wax u kala baxsan yihiin, laakiin ardayga bilowga ah waa inuu marka hore ku tafaquho mad-hab madaahibta kamid ah. Iyo adila doodii maskax diisa way ka yara weyn ahujaac, wuxuu u baahan yahay marka hore sida culimad tilmaamayaan inuu mad-hab mucayin ah ku tafaquho.
Madaahib taa mid kamid ah inuu marka aguu ku tafaquho oo barto, markuu mad-hab kaa barto kadib ayuu markaa wuxuu ugu gudbayaa marxalada xigta inuu madaahib tii kale barto, wey u fududaan neysaa marka, haddaad kan Shaaficiga taqaano waxaad leedahay Maaliki yada maxay isku qilaafsan yihiin waa fudutahay asaas kii baad haysaa markaa, Xanafi yada maxay isku qilaafsan yihiin, Xanaabilada maxay isku qilaafsan yihiin.
Laakiin haddaynaan mad-hab mucayan ood taqaano uusan jirin ood badd weyn taa dhex gasho waad wareeri, waana dhibka hadda haysta talabatul cilmiga ayay kamid tahay. Marka mad-hab mucayin ah in lagu tafaquho bilowga hore waa midday culimadu ku naseexeyn nayaan ooy ku talin nayaan waaye. Bal cilmiga xadiiska ragga taqasus ka siyaada daa u leh Shaafici yada ayay u badan yihiin, aad na waa loogu qitmeeyay mad-habka Shaaficiga waxaa u badnaa muxadithiinta ayaa u badnaa.
Marka sidaas daraadeed xagga daliilka waa ugu dhow yahay, madaahibta ugu dhow buu kamid yahay, imaamka mad-habka iskaleh na wuxuu jamciyay beynal fiqih wal xadiith …. Bal waxaa la yiraahdaa waa wbuu ugu horeeyay ee jamciyay beynal fiqih wal xadiith aad bey ugu amaan naan arrin taa iyada ah. Intaasi waa hordhac kadibna waa kaa kitaabkii uu inoo bilaabay Sheekha. Mahad Alle ayay u sugnaatay, amaan dhamaan teed iyo mahad dhamaan shujawc Alle ayaa iskaleh, uunka oo dhan Rabbi u ahaa, [yacni iskalahaa oo maamul laayay oo abuurtay], Allah ha amaano sayyid keena kor kiisa Allah ha amaano, Muxammad ahaa, ee Nabiga ahaa [kii loo waramay] ahaa.
Imaamu Shaafici Abuu Xaniifa waxba kama qaadanin, lamana kulmin, ma soo gaadhin, laakiin ardaydii Abuu Xaniifa buu wax ka qaatay. Maxammad ibnul Xassan ash-Sheybaani ardaygii Abuu Xaniifa ayaa Shuruuq diisa kamid ah, doodo dheer na waa dhex mareen.
Imaamu Shunaac oo mad-habka Maalikiga ah, imaam kiisa shukaac sheekhiiqa buu ahaa, imaamu Shaafici buu sheekh shujaca ahaa. Imaamu Axmad ibnu Xambal oo mad-habka Xambaliga ah, imaam kiisa ahna arday buu Shaafici u ahaa, Shaafici sbuu Sheekh u ahaa.
Saad daraadeed laba imaam midna arday buu u ahaa, midna Sheekh buu u ahaa, imaamka saddexaad na ma soo gaadhin laakiin arday diisii bey kulmeen, sidaas weeye marka. Ikhtisaarku iyo iijaazku wey isku macna dhow yihiin, culimada qaar na wey kala duwayaan. Khaayah iyo nihaaya na wey isku macna dhow yihiin, qaar na xooggaa macnaha waa u kala duwayaan.
Macnaha wuxuu doon nayaa inuu ku yiraahdo, gaabinta aan kitaabka gaabin naayo iyo soo koobida aan soo koobayo meesha uga dambeysa ee koobid la gaadhsiin karo ama gaabin la gaadhsiin karo ayaan gaarsiin nayaa waaye, saas weeye macnaha.
Waxay ku xidhan tahay, yacni culimadu markii cilmiga la baran nayo bilowga hore ardaygu muqtasaraadka ayaa la xifdiyaa, yaa mutuunta ayaa la xifdiyaa. Marka kutub taan la soo gaabin naayo asal ahaan waxaa loogu tala galay in la xifdiyo, shujawc ardaygu markuu matni xifdisan yahay ama mutuun xifdisan yahay cilmi badan baa ku jira marka, wax yaalaha waayahaan dambe laga tagay bey kamid tahay, marka taas ayaan ugu tala galay buu yidhi.
Yacni qaabka ay culimadu kutubta u alifaan fiqiga, hsujaac u qeybiyaan. Marka cibaadaad ku waa wixii ku saabsan afarta, marka laga yimaado shahaada teen ka afarta tiir ee Arkaanul Islaamka.
Iyo wixii iyaga raacsan oo ka ak dhow ayaa cibaadaad la yiraahdaa, kadib mucaamalaad ka waxaa imaan nayaa beycii mucaamalaad ka suuqa wax kala iibsiga, waxaa imaan naya kadib nikaaxii iyo talaaqii iyo axkaam toodiimucaamalaad bey isku dhahaan, kadib wax ka sii dambeyn naya xuduud iyo jinaayaadjinaayaad ka waa dhibaatooyinka leysu geysto, xuduud duna waad garan neysaan.
Sidaa markey u qeybiyaan baa culimada waxay hor mariyaan oo kitaabta fiqiga lagu bilaabaa qeybta ugu horeyso oo cibaadaadka ah, cibaadaadka marka lagu bilaabaa, cibaadaadka ayaa haddana sii qeyb samayaa, cibaadaadka maxaa u horeeya? Dhahaaradii markii la bilaabo iyada laf teeda baa waxay ka bilaaban neysaa intaadan weeyseys sanin ama aadan qabeysanin, waxaa laga hadli wixii lagu dhahaara qaadan lahaa, oo maxay ah?
Tahaaradu waa is nadiifin iyo nadaafad oo xadathka ee ama qabeys ka waajibiya ama weysada waajibiya oo leyska taahiriyo waaye, leyska kor yeelo. Biyo leysku taahirin karo toddobo biyo waaye, 7 nooc oo biyaha suujaac ah ayaa leysku taahiriyaa ama lagu dahaara qaataa ama wax lagu daahiriyaa. Baradka waxaa la yiraahdaa waa nooc barafka kamid ah, duruurta oo wuxuu ka soo dhacaa ama kor ka yimaada asaga oo yaryar oo aad xabad xabad yaryar ah buu daruurta ka soo daataa oo is hayso oo adag, markaasuu dhulka ku soo dhacaa.
Baraf kor ka imaan naya, midna wax is haysto yaryar oo adag ma aha, sida caleenta oo kale ayuu u daadan nayaa, sida barafka hadda Yurub ka dhaca oo kale, caleen daadan neysa ayaad moodeysaa maba dareem meysid.
Biyayow gaas marka uu sheegay ee todobada ah, meelaha ay ka kala yimaadeen ee seey ku imaan nayaan un bey ku xidhan tahay oo waxay ku ururayaan dhamaan tood ama biyo kor ka yimid ama biyo dhulka ka soo baxay labadaa mid waaye. Markii laga fiiriyo qeybintii hore ee todobada ahayd waa meeshay ka soo jeedaan iyo qaab kooda marka la fiiriyo waxay u qeyb samayaan todoba.
Afar qeybood na waxay u qeyb samayaan marka laga fiiriyo dhinaca ah ku dahaara auu iyo wax daahirinta, wax ma daahiriyaan mise wax shujac daahiriyaan, isticmaal kooda ma karaaha mise waa iska banaan yahay, dhinac yahaa marka aad ka fiiriso afar bey noqon nayaan.
Bi macnaa waa biyo magacooda biyo un baa la dhahaa, wax kale oo lagu xidhi oo loo raacin naayo ma jiro sooma aha? Biyo saabuuni ku jirto ma biyo keliya ayaad dhihi karto? Waxay leeyihiin dhibaato caafimaad baa ku jirto oo baras baa ka dhasho bey leeyihiin, waxay u daliishan nayaan axaadiith marfuuc ah iyo athar Cumar rc ka soo arooray, kuli na waa wada daciif, daliilka loo daliishaday biyaha qoraxda kuleysay, weliba shuruud bey ku sii xidhaan oo waxay leeyihiin.
Iyagu wax ma daahiriyaan, laakiin laf ahaan tooda daahir bey u yihiin, si kale waad u icticmaali kartaa, waad cabi kartaa, wax baad ku karsan kartaa, laakiin inaad ku weyso qaadato ama qabeys waajib ah aad ku gudato ood isku daahiriso maya, abuy ma daahiryaan laakiin lafa hooda ayay daahir u yihiin. Waa biyaha loo isticmaalay yacni dahaara qaadasho waajib shujac baad u isticmaashay, maxay ka wadaan? Waxaad u isticmaashay weeso waajib ah, waad ku weeso qaadatay, biyahii markaad weyso qaadatay xubna haaga ka daatay ayaa mustacmal la yiraah.
Ama qabeys waajib ah ayaad qabeysatay biyahii xubna haaga ka daatay ee aad ku qabeysatay baa waxaa la yiraahdaa, mustacmal. Weyso labaad ma galaan, qabeys labaad na ma galaan, laakiin lafa hooda daahir bey u yihiin sooma aha? Mathalan weyso qaadasho sunno ah baad ku weyso qaadatay ama qabeys sunno ah baad ku qabeysatay ama qabeys iska caadi oo aad is qaboojin neyso ama is nadiifin neyso ayaad u isticmaashay, waa lagu dahaara qaadan karaa bey leeyihiin.
Marka dahaara labaad waa geli karaa, marka dahaara ayay ku qayidaan mustacmal waaye biyahaas. Iney daahir yihiin hadal kama joogo, ineysan waxba daahirinin baa muran ka jira.
Meeshaa inteynaan ka gudbin aan baraarujino dadka qaar baa waxay u fahmeen biyaha mustacmalka ah, biyaha marka ruuxu uu weyseesan nayo intuu gacanta geliyo oo uu ka soo darsado, wajiga ku dhaqdo oo ku weyso qaato, ama intuu gacmaha geliyo ka qabeysto oo weelka ku soo hadha, biyahaas ayay dadka qaar kood u qaateen iney mustacmal yihiin. Kuwaa mustacmal lama yiraahdo, mustacmalku waa biyahii xubna haaga ka daatay ama jir kaaga markaad dahaara qaadato ka baxay, kuwaa haddii la uruuriyo bey ka hadlayaan, mustacmal kuwaas ayaa la dhahaa waa in sidaa loo fahmo waaye.
Weli waxay fuqahada Shaaficiga leeyahiin, biyahu weli intey xubinka ku warwareega hayaan eynaan weli ka daadanin mustacmal ma noqon bey leeyihiin, intey xubinka suujaac ku dhex jiraan oo ay ku noqnoqon hayaan oon weli ka bixin mustacmal weli meynaan noqonin, mustacmal goormey noqdeen?
Labada qula maxaa la yiraahdaa? Qullada waxaa la yiraahdaa wuu inoo sheegi doonnaa isaga ayaa inoo soo wado. Biyahu iney qullateyn ka yar yihiin, nijaasa na gaadho ama ha bedesho ama yeynaan bedelin wey sjujaac soobayaan haddey nijaaso ku darmanto.
Qullateyn bey gaadhsiisan yihiin ama wey ba ka badan yihiin, markaa waxay nijaas soobayaan keliya hadday nijaasadu bedesho.
Marka biya yar dhujaac ku nijaas soobayaan bi mujaradin mullaaqaati najaasa. Mar hadday nijaasadu gaadho biyaha yarka ah waa nijaas soobeen, xataa yeynaan is bedelin ba, biyaha abku na nijaasadu ma saameeyso ilaa ay bedesho.
Yacni wuxuu doon nayaa inuu ku yiraahdo qullada qiyaas teeda maxay tahay? Anaga hadda mathalan markaan wax yaalaha likuwidka ah, wax yaalaha maayaca ah, ee dareeraha ah, markeynu doonneyno ineynu qiyaas tiisa ogaano maxaan isticmaalnaa?
Hadda liter baan isticmaalnaa, liter, milliliter waxaas ayaan isticmaalnaa, waaggii hore kaasi lama isticmaali jirin. Waxaa la isticmaali jiray, waa la miizaami jiray miizaan baa la isticmaali jiray.
Miizaan kii buu doon nayaa marka inuu ku xaddeeyo. Qullataanka waxaa la yiraahdaa buu yidhi: Biyo miizaan kooda u dhigmaan oo rodol oo rodolka Baqdaad ah, muxuu Baqdaadi u leeyahay? Sidaas daraadeed rodolka Baqdaad oo rodol markaad kafada saarto, biyaha u dhigma ee kafada abuuu ceshen kara ayaa waxaa la yiraahdaa qullataan. Yacni waxaa laga wadaa, waxaa kala gedisan, yacni taxdiidan aw taqriiban ama tatti iyo taqriibtaqriib waxaa la yiraahdaa; waa dhadhaweyn.
Saa daraadeed haddey hal rodol hoos uga dhacda ama laba rodol waxaan shujaax dhib male. Haddayhadday noqoto waa taqriiban waa u dhadhaweyn ee kama ak anuu sooma aha?
Laakiin haddii taxdiid lagu dhaho ama tatti lagu yiraahdo waa iney shanti boqol ku fadhiisato, hal rodol haddey hoos uga dhacdo ma sax sana weeye markaasi taqriiban marka waa dhadhaweyn weeye agagaarka weeye meelaha agagaar keeda ah weeye taqriiban macnaha.
Adiga qullataanka xadiis baa ku soo arooray oo saxiix ah oo xad daa sheegaya, waana xadda ugu fiican oo lagu kala saaro biyaha badan iyo biyaha yar, biyaha yar oo ku nijaas soobaya la kulanka nijaasada wbuu biyaha badan oo aan nijaas suujaac ilaa ay nijaasada gaadhay ama ku dhax dhacday abuj bedesho, xadda kala saarta ee ugu fiican waa taa xadiiska ku soo shujaxc, xadiis kana waa xadiis sugan.
Haddii liter loo bedelo oo maqaayista hadda aan u isticmaalna ah, labada qullo waxay noqon nayaan sida ay culimadu sheegayaan taqriiban liter waaye. Haa liter meelahaas weeye ayay imaan nayaa, kaa liter marka wixii ka yar nijaaso hadday gaadho wey nijaaseyn neysaa waaye ama ha bedesho ama yeynaan bedelin, wixii ka badan ama la eg na?
Haa laakiin hadda duuduub ku liq, mar dambe ayaad ka niqaashi doontaa. Marka qullada waan soo sheegay oo qullada wax weeyaan, waa Ashuun weyn, dheri miyaan iri markii hore? Ashuun waaye ee dheri ma aha. Hal kaasi waxa weeye waa biyayowga lagu dahaara qaato, wax yaalaha wax daahiriya waxaa kamid ah oo lagu dahaara qaato magdin wax la yiraahdo oo hargaha ku saabsan tii buu galayaa.